तमोनदी | मझेरी डट कम
kbs — Thu, 05/05/2011 - 18:21
हिजोआज नदी बग्दै छ कि 'तमोनदी' बग्दै छ, थाहै हुँदैन । थाहा होस् पनि कसरी हाम्रा कल्पना, बोध र सोचाइले जेलाई पानी भन्दै आएको छ त्यस्ता कुरा नदीमा भेट्न गाह्रो छ । कतै रूप बिग्रिएको नदी-चित्र नै मनुष्यको मस्तिष्कमा रहिरहने त होइन ? एक पटक काठमाडौँको बाग्मतीलाई हेरेर यो प्रश्नको उत्तर खोजौँ । के अहिले यो नदी नदीजस्तो छ ? सङ्लो पानी कतै छैन । नदीको आहृलादमय सुसाइ कसरी भेट्ने यहाँ ? कसरी हुनसक्छ जलबाट जीवनको अनुभूति बाग्मतीलाई हेरेर ? त्यो सुसाइ, त्यो प्रवाह, त्यो दृश्य र त्यो विशेषता केही छैन जसलाई नदी भनेर आनन्द मान्न सकियोस् र पवित्र मानेर आत्मसन्तोष लिन सकियोस् । न निसङ्कोच नुहाउन सकिन्छ, न पिउन सकिन्छ यहाँको पानी । अत्यन्त दुःखद अवस्था छ । आजको बाग्मतीले नदीको रूपमा अति कारुणिक दृश्य प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
आश्चर्य लाग्छ यति भयानकरूपले प्रदूषित रहँदा पनि यो नदीले कसरी भावनात्मक प्रेम र आदर आर्जन गरिरहेको होला ? त्यसैले बाग्मतीलाई अहिले तमोनदी नभनौं । सबै नदीहरू हाम्रा गौरव हुन् । यो नदी झन् हाम्रो गौरव हो ।
तर बाग्मतीको जब यो हालत छ! काठमाडौँका अरू नदीहरू विष्णुमती, मनोहरा, ईच्छुमती, रुद्रमती आदिको दुर्दशा भोग्नेहरूले त प्रतिदिन भोगी नै रहेका छन् पीडा नभोग्नेहरूका निम्ति पनि स्वतः अवस्था अनुमान हुन्छ । फोहोरले पानी घिसारेजस्तो छ । एकदम कहाली लाग्छ! भयानक निराशा उत्पन्न गर्छन् काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूले ।
तर प्रसङ्ग काठमाडौँको मात्रै होइन । नदी प्रदूषण देशव्यापी कुरा हो! अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो । के गङ्गा नदी प्रदूषणमुक्त छ ? के यमुना शुद्ध छ ? के सिन्धुमा यस्ता समस्या छैनन् ? सागरदेखि महासागरसम्म, खोलादेखि नदीसम्म, स-साना पोखरीदेखि ठूल्ठूला तलाउसम्म, गाउँदेखि सहर र देशदेखि महादेशसम्मको जलस्रोत प्रदूषणको मारबाट बच्न सकेको छैन । नदीलाई जीवनको प्रतीक मान्दै आएका हामी मानव जाति प्रदूषणयुक्त नदीहरूलाई पनि जीवनको प्रतीक मान्न विवश छौँ ।
हेर्दाहेर्दै यत्रो समस्या किन तेर्सियो ? कतै नदी प्रदूषणका कुरा पनि देखावटी मात्रै त होइनन् ? अवश्य पनि भित्री कुरा अर्कै हुनुपर्छ । प्रकृतिका जेजे कुराहरूले नदीलाई स्वच्छ पार्छ तीती कुराहरू नै विषाक्त भएका छन् । नदी प्रदूषणका कारणहरू के-के होलान् ? यहाँ केवल फ्याँक्ने, बगाउने, सेलाउने र बिसर्जन गर्ने फोहोरको मात्र कुरा छैन । हाम्रो सोचको विकार, दृष्टिकोणको सङ्कुचन, कुदृष्टि, कुचेष्टा, घृणा, घमण्ड, परपीडा, अहङ्कार अन्याय, दुर्भाव, दुष्कर्म, हिंसाजस्ता अनेक वैचारिक त्रुटि र भावनात्मक प्रदूषणको कुरा पनि छ । नदीहरू त प्रतिनिधि मात्रै हुन् । हिजो पनि बग्थे, आज पनि बगिरहेका छन् । बग्ने निरन्तरतामा क्रमभङ्ग नहुनु नदीहरूको मौलिक स्वभाव हो तर के बगाइरहेका छन् अहिले हाम्रा नदीहरू, ऐनाझैँ आफ्नै अवलोकन गरे हुन्छ बगिरहेका प्रदूषित नदीहरूमा ।
यस्तो अवलोकन होस् जसबाट छर्लङ्ग बुझियोस् जल र जीवनको अन्तरसम्बन्ध । वास्तवमा नदीले समाजलाई धेरै कुरा दिएको छ । नदी किनारामै मानव बस्तीहरू रहेका छन्, भू-उर्वराशक्ति त्यहीँ छ, त्यहीँ जुट्छन् जीवन निर्वाहका साधनहरू, विकासका मीठामीठा धुनहरू त्यहीँ बजिरहेका छन् र त्यहीँ भेटिन्छ मानव जिजीविषाको अजेय र अनन्त अस्तित्व । यसो भनौँ बगिरहेका नदी वरिपरि नै प्रगति घुमिरहेको र वैभव फैलिरहेको छ । पानीको विकल्प पानी नै हो ।
बहस खालि पानी कति शुद्ध, कति अशुद्ध भन्ने मात्र हो । पहिले नदीहरू पनि शुद्ध थिए । मानिसमा पनि तमोगुण छँदै थिएन भन्ने होइन तर जेजति थियो त्यो सबै नदीको कञ्चन पानीमा डुबुल्की मार्दामार्दै समाप्त भएर जान्थ्यो । शुद्धीकरण गर्ने यो प्रक्रियाले मानव-समाज पूर्ण लाभान्वित भइरहेको छ । त्यसैले आज पनि हामी भनिरहेकै छौं-सिन्धु-सभ्यता, गङ्गा-सभ्यता, नाइल-सभ्यता, टिग्रिस-सभ्यता, भोल्गा-सभ्यता, छाङ्हो-याङ्ग्जे-सभ्यता, अमेजन-सभ्यता आदि-आदि । भर्खरभर्खर हामी नेपाली पनि बोल्न थालका छौं-कोसी-सभ्यता, बाग्मती-सभ्यता, गण्डकी-सभ्यता, कर्णाली-सभ्यता ।
यसरी हामीलाई नदीले जीवन र सभ्यता दिँदोरहेछ । यो अर्थमा पहिलेको समयलाई नदी-युग नै मान्नुपर्छ किनकि त्यसबेला नदीले सभ्यता मात्र निर्माण गरेन मान्छेलाई सभ्य बन्न पनि सिकायो । यहीँको पानीमा मान्छेको तमोगुण नष्ट भएर जीवन सार्थक र सफल हुन्थ्यो । रसमय धर्ती नदीकै कारणले प्राञ्जल पनि हुन्थ्यो । अन्नमा कुनै विकार थिएन, मानिस नदी, धर्ती, आकाश, सूर्य, हावा, रुख-वनस्पतिजस्ता प्रकृतिका भिन्नभिन्न रूपप्रति आस्थावान् थिए । नदी किनारामा हुर्किरहेको जीवन पद्धति र सभ्यतालाई नदीहरूकै सभ्यता मान्नु त्यसबेलाका मानिसको वस्तुपरक सोच हो ।
अबको तमोगुण भने त्यति निर्वल छैन, जसलाई नदीहरूले सजिलै बगाउन सकु्न् । नदीहरूको आफ्नै गुनासो छ । 'म दिन प्रतिदिन गलिरहेको छु । मेरो पानीमा के विष मिसियो मिसियो- म आफैँ निर्मल छैन, अरूलाई के निर्मल, पारौँ' भनिरहेको छ हाम्रो बाग्मती पनि । त्यत्तिकै खतरनाक छ जनगुनासो । 'विवश मान्छेको विवशता बुझ । हे बाग्मती ! हे नेपाल गङ्गा ! हे नदी-खोलाहरू ! हाम्रो तमोगुणको धूलो मरुभूमिमा बालुवाजस्तै व्यापक छ र फोहोरमैलाको लेदो थेग्नै नसक्नेखालको छ । अन्त कहाँ जाउँ- बगाऊ, नबगाऊ, जे गर । यो हाम्रो तमोगुणको धूलो, तमोगुणकै फोहोर-लेदो, कोही मनमनै र कोही खुलेआम यसरी विवशता पोखिरहेका छन् यहाँ ।
सरकारी संयन्त्रको एउटै अलाप र रट झन् पट्यारलाग्दो किसिमले गुञ्जिरहेको छ । ऊ भन्छ 'एक्लो सरकारले के हुन्छ । आउँ, सबै जुट्दै, हातेमालो गर्दै नदीहरू बचाउनु पर्छ । वातावरण जोगाउनु पर्छ । बाग्मतीको पनि रक्षा गर्नुपर्छ । साधन-स्रोत छैन, यो बेला जनताको साथ नभए सरकार केही गर्न सक्दैन । जनतामै अपार शक्ति छ । यो शक्ति जुट्यो भने बाग्मती त के नेपालका सारा नदीहरू शुद्ध हुनेछन्, नेपाल नै प्रदूषणमुक्त हुनेछ । राम्रो काममा सरकार हरघडी तपाईंहरूको साथ हिँड्न तयार छ ।' सबैका आ-आफ्ना समस्या छन् । को कसकासाथ हिँड्ने-जनताका साथ सरकार कि सरकारका साथ जनता ? यसरी बगिरहेको छ नदीहरूमाथि तमोनदी ।
के कोही यो विवशताको चक्रव्यूहबाट मुक्त भई नदीका निम्ति, जीवनका निम्ति र वातावरणका निम्ति सच्चा मनले केही गर्न तम्सिएला ? नदीहरूको दयनीय रूप हेर्दा आशा, भरोसा र विश्वासका कुनै सङ्केत देखा पर्दैनन् ।
फेरि निःस्वार्थ मान्छे पनि हुँदैन र संस्था पनि हुँदैन । नदीलाई स्वच्छ-सफा राख्ने काम पनि स्वार्थको नै हो । व्यक्ति, समूह, समाज र सरकार सबैको सरोकार यहाँ छ । त्यसैले यो यस्तो काम हो जसलाई बाधाहरू छिचोल्दै, विकारहरू हटाउँदै, समस्याहरू हल गर्दै र अभावहरूसँग जुँध्दै अघि बढिरहेका मानिसले मात्र समाधान गर्न सक्छन् ।
कुनै तपस्वी-त्यागी महापुरुषको छुमन्तरबाट हाम्रा नदीहरू स्वच्छ र सफा हुन सक्दैनन् ।
अब तमोगुणको व्याप्तिलाई समयमै रोक्नुपर्छ । भौतिकरूपले पनि आध्यात्मिकरूपले पनि तमोनदी बग्नै दिनुहुन्न ।
आकार चेतनाको र निराकार चेतनाको दुवै तहबाट फोहोर नफाले हाम्रा नदीहरू सफा हुँदैनन् । त्यसैले, नुहाउँ, सफा होउँ, धोउँ पहिरन र घर-आँगन सफा होस् हाम्रो तर सोचौँ के हुँदैछ हाम्रो पानीको मूलस्रोत-नदीहरूमा । अब घर र नदीबीचको फोहोरको सम्बन्धलाई तोड्न सरकारको के भूमिका हुनसक्छ सरकार नै बोलोस् । नागरिकहरू यसैमा लागुन् । गैरसरकारी संस्थाहरू र वातावरणविद्हरू पनि यही अभियानमा जुटुन् । वातावरण-सम्बर्द्धन-सहयोगलाई सूक्ष्म तहमा लाभकारी बनाउने तरिका पनि यही हो । अबको नेपालमा घर र नदीबीच पारस्परिक सफाइको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ ।
नदीहरू स्वच्छ पार्न निराकार चेतनाको पनि अहं भूमिका छ । बाहिर जे भने र गरे पनि हाम्रो अन्र्तमन सधैँ मौन आवाजमा भनिरहन्छ, 'प्रेमले घृणालाई जित, विवेकले काम गर, भाइचारा, विश्ववन्धुत्व, वातावरण रक्षा, प्रकृति प्रेम र भू-संरक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई कहिल्यै भुल्नु हुन्न । आफ्नो बासस्थान सधैँ रमणीय बनाऊ । नदीतिर कुनै फोहोर जानै नदेऊ ।'
विचारको फोहोर कामको फोहोरमा मिसियो भने गुणाङ्क दरमा विकारहरू उत्पन्न हुन थाल्छन् । यसैबाट बग्न थाल्छ तमोनदी । अहिले तमोनदी नदीमा मिसिएका हुनाले नदी-सभ्यता हराएको हो । अहिले केवल महानगरीय सभ्यता छ । तमोनदीको भयानक फडामा जब अनादि कालदेखिको नदी-सभ्यता नै हरायो भने कतिञ्जेल रहिरहला यो महानगरीय झिलिमिली र रमिता । समयको प्रवाहमा नयाँ सभ्यता उदाउँछ र पुरानो सभ्यता बिलाउँछ ।
खतराको घण्टी सधैँ झुण्डिरहेकै छ । खालि नबजुञ्जेल हामी सुरक्षित छौँ । के यही गतिमा नदीमाथि तमोनदी बगिरहने हो भने बाँचिरहला हाम्रो प्यारो महानगरीय सभ्यता ? व्याप्त छ झिलिमिली, संसार रमाइरहेको छ । टैङ्करका टैङ्कर पानी आपूर्ति गरिरहेको छ महानगर । धारामा थोपा पानी नझरे पनि 'मिनरल वाटर' 'शुद्ध जल', चिसो-तातो पानी आदि केके धन्दा जानेको छ आजको मान्छेले ।
कतिञ्जेल धान्न सकिएला यो सुविधा ? हेर्दाहेर्दै कञ्चन नदीहरू कालामैला भइसके । तमोनदीको मूल कसरी फुट्यो, किन तनको पनि फोहोर मनको पनि फोहोर त्यहीं पुगेर दुर्गन्धित भइरहेका छन् हाम्रा नदीहरू किन विकृति यसरी मौलायो र किन तिनीहरूको समयमै नियन्त्रण हुन सकेन! आँखा अगाडिको झिलिमिलीले कसैलाई सोच्न दिएको छैन । व्यक्ति, संस्था, समाज र सरकार! कोही थोरै, कोही धेरै तमोनदीको मोहजालमा परिरहेका छन् । तमोनदीको यस्तो मोहबाट बिस्तारबिस्तारै फुत्किँदै जानसके हाम्रा नदीहरू पनि क्रमशः शुद्ध हुन थाल्ने थिए र जलमा जीवनको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो ।
पछि हड्नु हुन्न अब
कतै भने पेटभित्र आगो बली रह्यो
ऐंठन होला होला जस्तो लाग्यो
डाको छोडी रुन सक्दिन
मलाई पनि हाँस्न सिकाउ
तामाङ साहित्य एकेडेमी गठन
अशान्तिको, बीज रोपी, शान्ति खोज्दै, लड्यौं किन ?